Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Myanmar rejects the comments by Malaysian Leader
Myanmar rejects the comments by Malaysian Leader
(Nay Pyi Taw, 31 July 2019)
U Myint Thu, Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs, received His Excellency Mr. Zahairi Baharim, Ambassador of Malaysia to Myanmar, at the Ministry of Foreign Affairs on 31 July 2019 at 1500 hrs.
Permanent Secretary expressed his dismay and objected to the comments recently made by Malaysian Prime Minister that displaced persons should be treated as nationals or be givenachance to form their own state and that genocide is happening in the country.
Permanent Secretary further stated that such allegations are not supportive to the ongoing efforts of Myanmar Government and ASEAN in findingasustainable solution for peace, development and social harmony in Rakhine State. It was also against the ASEAN’s cardinal principles of non-interference in the internal affairs and respect for the sovereignty and territorial integrity of ASEAN Member States.
The Malaysian Ambassador was also informed that Myanmar categorically rejects allegation on genocide in Myanmar, which is not constructive and in breach of the principles enshrined in the ASEAN Charter.
မြန်မာနိုင်ငံမှ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ အကြီးအကဲ၏ ပြောကြားချက်အပေါ် ကန့်ကွက်
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမြင့်သူသည် ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှားသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Zahairi Baharim အား ၃၁-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ (၁၅၀၀)နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်၏ ဧည့်ခန်းမ၌ တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ဝန်ကြီးချုပ်၏ မကြာသေးမီက သတင်းမီဒီယာနှင့်တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နေရပ်စွန့်ခွာသူများအား နိုင်ငံသားပေးသင့်ကြောင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ နယ်မြေပေးသင့်ကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစုလိုက်အပြုံလိုက် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့မှုအပေါ် ကန့်ကွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က အထက်ပါပြောကြားချက်များသည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှု၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အသိုက်အဝန်းများအကြား သဟဇာတဖြစ်မှုအတွက် ရေရှည် တည်တံ့မည့် အဖြေရရှိရန် မြန်မာအစိုးရနှင့် အာဆီယံတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုများကို အထောက်အကူမပြုကြောင်း၊ ထို့ပြင် တစ်နိုင်ငံ၏ပြည်တွင်းရေးကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း မပြုရန်နှင့် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် နယ်မြေတည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကို လေးစားလိုက်နာရန်ဟူသော အာဆီယံ၏ မူဝါဒများကိုလည်း သွေဖည်ရာရောက်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုများ ဖြစ်ပွားနေသည်ဟူသော တစ်ဖက်သတ် စွပ်စွဲပြောကြားမှုများမှာ အပြုသဘောမဆောင်သည့်အပြင် အာဆီယံပဋိညာဉ်ပါမူဝါဒများကိုလည်း ချိုးဖောက်ရာရောက်သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် လက်မခံကြောင်း ကန့်ကွက်ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။